Onye Amuma - Khalil Gibran (PDF) - AFRIKHEPRI
Satọde, Epril 4, 2020
Magnesium chloride, ọgwụgwọ a na-amaghị ama na-agwọ ọrịa
Ile anya na họtel Rwanda (2004)
Kedu ihe kpatara yoga?
General akụkọ ihe mere eme nke Africa (Mpịakọta nke 8)
Railgbọ okporo ụzọ jikọtara mba ise ọdịda anyanwụ Africa
Ndị na-eto eto abụọ nke Nigeria na-emepụta ihe nchọgharị mgbagwoju anya, ihe nchọgharị dị mfe karịa Chrome
Onye Amụma - Khalil Gibran (PDF)
egwu Akwụkwọ PDF
I meghachiri "Onye Amụma - Khalil Gibran (PDF)" Sekọnd ole na ole gara aga
AKhalil Gibran na-egosi ịdị mma nke ụwa na ọdịdị mmadụ, ọdịdị nke ihe karịrị ọhụụ ha. Utọ na miri emi, ekwesighi iwere ihe odide a dị egwu. Guo site n’otu isi rue na nke ozo ma obu onye abia n’oge, a gha agha agha n’otu n’otu iji nyere aka ghota ma obu ikwenye na aghotaghi ihe ufodu na ndu. Khalil Gibran na-enye anyị nghọta miri emi nke ihe, dịka ịmụrụ anya na-eme ka anyị na-ahụ ihe dị ịtụnanya n’ihe ndị a na-egbochi n’ụzọ ndụ kwa ụbọchị. Nihi na obu ya bu atumatu, ma obu naani bu okwu a na-ekwu okwu bu nke nwere ike ibute ebumnuche nke okwu Chineke. Mana naanị ịbịaru ya nso, ihe niile bụ nnwale.
Ọ bụ oge maka Almustafa, onye amụma a hụrụ n'anya nke obodo Orphalese, ịhapụ àgwàetiti ahụ ịlaghachi n'obodo ya. Tupu ọpụpụ ya, Almitra na ndị obodo obodo ahụ gwara ya ka ọ gwa ya ihe ọmụma banyere Ịhụnanya, Ọrụ, Ụmụaka, na ihe ndị ọzọ ... Ya mere, ọ na-ezipụ ozi ozi nke ìhè nke na-anọgide na - ya na ala.
Onye Amuma na Ubi Onye Amuma
7,12€ dị na ngwaahịa
2 dị ọhụrụ site na 7,30 €
Ejiri 4 mee ihe site na 7,11 €
ka nke Eprel 3, 2020 9:31
Ụbọchị mwepụta 2014-02-06T00:00:01Z
Publication Ụbọchị 2014-02-06T00:00:01Z
Ọga n’ihu Covid-19 n’ụwa niile